Sodium Hyaluronate mpanamboatra, orinasa Hyaluronic Acid, mpamokatra hyaluronan - AWA
Voninahitra sy ny Fepetra takina
Business Sava lalana
Ireo marika tena lehibe
INDRINDRA I SODIUM HYALURONATE
Ny sodium hyaluronate dia sira avy amin'ny asidra hyaluronic, ary ny lanjan'ny molekiola amin'ny 3000Da mankany 2500KDa ary CAS no. 9067-32-7. Izy io dia mucopolysaccharide polymer izay matetika ampifandraisina amin'ny N-acetylglucosamine sy D-glucuronic acid disaccharide unit. Izy io dia hita eo amin'ny hoditra, maso, tonon-taolana, ary ireo taova hafa sy ny taova mifangaro. Fantatra fa ny sodium hyaluronate dia manana fiasa ara-batana maro, toy ny fandraisana anjara amin'ny moisturizing, lubrication, fanasitranana ratra, fanamboarana ny taolana, famerenana indray, valin'ny fanaintainana, fampandrosoana ny embryonika, sns.
Ny sôdioma hyaluronate dia ampiasaina betsaka amin'ny vokatra fihinana, kosmetika ary fanafody. Nohamafisina ny fiarovana azy, ary tsy azo inoana ny hiteraka fihetsiketsiketrika satria miparitaka voajanahary ao amin'ny vatan'olombelona. Misy fomba roa hamokatra sodium hyaluronate, fitrandrahana avy amin'ny atody akoho, ary fatrohana biolojika. Mampiasa fermentation biolojia izahay, miaraka amin'ny tsy GMO, tsy loharano biby.
Ny systeam kalitao
> SIDA COSMETIC GRADE sodium hyaluronate
Ny sôdiôma hyaluronate no singa manan-danja amin'ny taolam-pifandraisana toy ny otrik'aretina fanafoanana ny olombelona, ​​vatana marefo ary tsiranoka synovial. Manana asa ara-batana maro. Rehefa mihena io dia tonga ny aretina. Noho izany dia ampiasain'ny olona izy io amin'ny fitsaboana ny aretim-piraika sy ny aretin-kozatra, ny kapoka manify, manasitrana ratra, sns.
> GRADE GRADE sodium hyaluronate
Sodium hyaluronate dia voazara voajanahary ao amin'ny vatan'olombelona, ​​izay mihena raha mandeha ny fotoana. Voaporofo fa afaka mahazo sodium hyaluronate ny olona amin'ny alàlan'ny sakafo. Manjary miha-malaza hatrany ny fananan'ny olona famenon-tsakafo ampy hanatsarana ny fahasalamana. Matetika dia miaraka amin'ny otrikaina, sulfat chondroitin, sns.
Oligo sodium hyaluronate dia vokatra vaovao novolavolain'ny teknolojia fanodinana bio-enzymatic. Ny lanjan'ny molekiola dia 3,000Da-10,000Da, izay mora entin'ny vatan'ny olona ary manana fiantraikany lalina hamandoana.
Ny sôdioma hyaluronate dia afaka manatsara betsaka ny bioavailability ny zava-mahadomelina amin'ny alàlan'ny hatezerany, ny fifandraisan'ny membrane ary ny fanafody amin'ny fanafody. Ny tombony dia tsy mitovy amin'ny fitaovana polimeraly hafa. Azo ovaina ihany koa amin'ny alàlan'ny fifandraisan-dàlana sy ny famerenana indray hanatsarana ny fotoana fihazonana amin'ny maso ary hampiakatra bebe kokoa ny bioavailability ny zava-mahadomelina.
FANDROSOANA FIDERANA 2020.8
MAMPIASA TEAM-MAMPIKORANA 2020.7
SHANDONG AWA BIOPHARM CO., LTD. naorina tamin'ny 15 Jolay 2010. Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana tombana efa ho 100 tapitrisa yuan, misy mpiasa mihoatra ny 100. Ny hery isan-taona dia manodidina ny 130MT amin'izao fotoana izao, ao anatin'izany ny 100MT amin'ny kosmetika sy sakafo grade HA, 20MT an'ny oligo HA, 10MT amin'ny maso mandatsaka ny kilasy HA ary 3MT amin'ny tsindrona sela HA. Miaraka amin'ny teknolojia famokarana mivoatra, kalitao avo lenta ary serivisy tsara taorian'ny varotra, dia mahazo tombontsoa tsara sy fahatokisana amin'ny mpanjifa isika.
Taorian'ny ezaka lehibe nandritra ny 10 taona, dia nanao lisitra tamin'ny New Three Board (code code: 832607) izahay ary nahazoana mari-pahaizana sy fahazoan-dàlana marobe, toy ny ISO9001, DMF, NSF, KOSHER, HALAL, ECOCERT, COSMOS, Fahazoan-dàlana amin'ny famokarana zava-mahadomelina, taratasy fanamarinana avo lenta teknolojia Enterprise, sns. Ary isika manohy mitombo sy mivoatra. Teny sarotra, tonga ny fotoana mamirapiratra.
NO.488 Huanghe12 Road, Binzhou tanàna, ShandongProvince, Sina
mason'ny kilasy HA
Tohizo ny famokarana 2020.8
Fanamboarana ekipa amoron-dranomasina 2020.7
Revision mpianatra amin'ny fitantanana morontsiraka Statement
Fanambarana fiovana LOGO
Hot Products ,Sitemap ,DIEM Mobile
Oligo sodium hyaluronate , Eye latsaka ny sodium kilasy hyaluronate, Tsindrona kilasy ny sodium hyaluronate